Moroko - BBC News Somali
Posted at 3:56 28 Luulyo 20213:56 28 Luulyo 2021
Posted at 11:59 5 Maajo 202111:59 5 Maajo 2021
In sagaal carruur ah oo mataano ah ay mar qura dhashaan aad bay dhif u tahay - Dhakhaatiirtuna waxay u maleynayeen in Xaliima ay uurka ku sidday 7 carruur ah.
Posted at 2:35 18 Disembar 20202:35 18 Disembar 2020
Posted at 14:51 14 Disembar 202014:51 14 Disembar 2020
Heshiisyadii Trump ee "halisuhu ku gadaaman yihiin" ee Bariga Dhexe
Wargeyska Financial Times ayaa faallo uu qoray kaga hadlay heshiisyada uu galay ee Bariga Dhexe ee madaxweynaha Maraykanka ee xilkiisu dhamaanayo, Donald Trump, oo kii ugu dambeeyey ahaa in uu aqoonsaday in Saxaraha Galbeed yahay qayb ka mid ah dalka Morooko.
Posted at 20:40 10 Disembar 202020:40 10 Disembar 2020
Israa'iil iyo Morocco oo ku heshiiyay soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskan ku shaaciyay bartiisa Tuwiitter-ka
Posted at 10:40 15 Sebtembar 202010:40 15 Sebtembar 2020
Kufsiga iyo dilka loogeystay wiilkan ... Sidee loola dhaqmayaa dembiileyaasha?
Waxaa baraha bulshada dalka Morocco harreeyay dhacdo naxdin leh oo ku saabsan wiil yar oo la kufsaday kaddibna meydkiisa laga helay dalkaas.
Posted at 3:37 30 Juunyo 20203:37 30 Juunyo 2020
Midowga Yurub oo diiday in looga soo dhoofo Maraykanka iyo Shiinaha
Posted at 16:02 28 Jannaayo 202016:02 28 Jannaayo 2020
Maxaa UK looga dalbaday inay mamnuucdo qalliinka lagu soo celiyo bikrada haweenka?
Qolyaha ol'olayaasha sameeya ee ku sugan UK ayaa dowladda ka dalbaday in la mamnuuco qalliinnada ay dhakhaatirtu 'haweenka ugu soo celiyaan bikrada'. Waxay sheegeen in arrintaas loo sameeyo haween ka cabsi qaba in la deyriyo ama xitaa la dilo.
Posted at 15:42 27 Disembar 201915:42 27 Disembar 2019
Morooko: YouTuber loo xidhay in uu boqorka caayey
Nin aad u caan ah oo YouTuber reer Morooko ah ayaa xabsi afar sanadood ah lagu xukumay iyo ganaax lacageed oo 4000 oo doolar ah, ka dib markii lagu helay dambi ah inuu caayey boqorka dalkaas.
Posted at 14:21 1 Oktoobar 201914:21 1 Oktoobar 2019
Weriye loo xiray in ay ilmo iska soo xaaqday
Dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dacwadda ka dhanka ah Hajar Raissouni ay qeyb ka tahay tallaabooyinka ay dowladda ku bartilmaameedsato Suxufiyiinta xukuumadda dhaleeceeya.